Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.1.3 Manaova anao manokana vokatra
Fanorenana ny vokatra ihany no mampidi-doza, avo-valisoa. Kanefa, raha miasa, dia afaka mandray soa avy amin'ny tsara feedback manome fitoerana izay manome fahafahana miavaka fikarohana.
Mandray ny fomba ny hananganana ny fanandramana manokana dingana iray lavidavitra kokoa, ny mpikaroka sasany hanangana ny vokatra. Ireo vokatra mahasarika ny mpandray anjara, ary avy eo dia manompo toy ny sehatra ho an'ny fanandramana sy ny karazana fikarohana. Ohatra, vondrona mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Minnesota nahary MovieLens , izay manome maimaim-poana, tsy-barotra manokana sarimihetsika tolo-kevitra. MovieLens efa niasa hatrany nanomboka tamin'ny 1997, ary nandritra izany fotoana izany 250.000 voasoratra anarana mpampiasa dia nanome mihoatra ny 20 tapitrisa naoty momba ny mihoatra ny 30.000 filma (Harper and Konstan 2015) . MovieLens nampiasa ny mavitrika fiaraha-monina ny mpampiasa ny fitondran-tena mahafinaritra fikarohana miainga amin'ny mizaha toetra ara-tsosialy ny siansa teoria momba ny fandraisana anjara amin'ny bahoaka entana (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) ny raharaha algorithmic olana amin'ny fanolorana rafitra (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; ho feno famerenana jereo Harper and Konstan (2015) . Maro ireo andrana tsy ho azo atao tsy misy mpikaroka manana fanaraha-maso tanteraka ny tena miasa vokatra.
Indrisy anefa, ny fananganana ny vokatra dia mampino sarotra, ka tokony hieritreritra izany toy ny famoronana ny start-up orinasa: fa mampidi-doza, avo-valisoa. Raha mahomby, io dia manome fomba maro ny fanaraha-maso izay azo avy amin'ny fananganana ny amin'ny fanandramana miaraka amin'ny realism sy ny mpandray anjara izay tonga avy miasa amin'ny rafitra-misy. Ankoatra izany, io no fomba mety afaka mamorona tsara feedback manome fitoerana izay mitarika ho amin'ny fikarohana bebe kokoa ny vokatra tsara kokoa izay mitondra any amin'ny mpampiasa kokoa izay mitondra any bebe kokoa mpikaroka sy ny sisa (Sary 4.15). Amin'ny teny hafa, indray mandeha tsara feedback manome fitoerana kicks in, fikarohana dia tokony hahazo mora kokoa sy mora kokoa. Na dia eo aza ny mety ho izany fomba ambony, tsy afaka mahita hafa ohatra ny fahombiazana, izay mampiseho fa tena sarotra tokoa ny hampihatra amim-pahombiazana. Nefa, ny fanantenako fa tetika io ho tonga bebe kokoa tahaka ny teknolojia ampiharina kokoa. Ireo olana amin'ny famoronana manokana mpikaroka vokatra midika fa izay te-hifehy ny vokatra dia azo inoana kokoa ny mpiara-miasa amin'ny orinasa, ny lohahevitra manaraka hiresaka aho.
Figure 4,15: Raha afaka soa aman-tsara ihany anorenanareo ny vokatra, dia afaka mandray soa avy amin'ny tsara feedback manome fitoerana: fikarohana mitondra ho tsara kokoa ny vokatra izay mitondra mpampiasa kokoa izay mitondra any amin'ny fikarohana bebe kokoa. Ireo karazana tsara feedback tadivavarana dia mampino sarotra ny hamorona, fa izy ireo dia afaka manampy fikarohana izay mety tsy ho azo atao raha tsy izany. MovieLens dia ohatra iray izay manana tetikasa fikarohana hahomby eo amin'ny famoronana tsara feedback manome fitoerana (Harper and Konstan 2015) .